Ungawukhuphela njani uMculo osuka kuYouTube usb? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 9, 2021 0 IiCententarios 757
Wena Tube yenye yeqonga levidiyo esetyenziswa kakhulu kwihlabathi kwaye sele isisalathiso esibalulekileyo sokufezekiswa kwe iividiyo ezitsha ezifumana ukubonakala okuhle kwi-Intanethi. Ineentlobo ngeentlobo zeevidiyo zomculo kwaye abantu abaninzi bahlala benomdla wokukhuphela ezi ngoma okanye iingoma.
Xa abasebenzisi be Tube Ukuba unomdla wokukhuphela umculo kwiividiyo, ufuna isiguquli seMP3 okanye Isikhupheli seTyhu ukwenza lo msebenzi. Ifayile yomculo ekhethiweyo inokugcinwa kwi-USB drive okanye kwi-PC, ukuze isetyenziswe kamva ngokokukhetha komsebenzisi ngamnye.
Ukuba umsebenzisi ufumana ividiyo kwi-You Tube kwaye angathanda ukuyidlulisela kwisixhobo se-usb kunyanzelekile ukuba ayifumane kuqala kwaye ayenze ibe yeyakhe khomputha. Emva koko, kuyadingeka ukusebenzisa ikhebula le-usb ukuhambisa ifayile yevidiyo ebanjiwe kwisixhobo esikhethwe ngaphambili.
Amaphepha amabini aluncedo okukhuphela iifayile zomculo kwi-You Tube
Kuyacetyiswa ukuba ungene kwiqonga le-You Tube kwaye ukhangele ividiyo ethile ofuna ukuyikhetha. Nje ukuba ifumaneke le vidiyo, its URL kwaye kwisikhangeli esitsha la maphepha alandelayo kufuneka avulwe: savefrom.net kunye 2mate.com. I-URL yevidiyo kufuneka incanyathiselwe kule ndawo "cola apha", qiniseka ukuba icandelo elilandelayo libonisa u "mp3" emva koko ucinezele ukuqala.
Amanyathelo okukhuphela umculo kwi-You Tube
Ukuqhubeka, umsebenzisi kufuneka anike “konqakrazo”Kukhetho ukukhutshwa yevidiyo yewebhusayithi, emva kwemizuzu embalwa kuya kuvela ikhonkco elitsha, ekufuneka "ucofe" ukukhuphela ividiyo kwiqonga le-You Tube. Emva koko isixhobo se-usb siqhagamshelwe kwikhompyuter kwaye "konqakrazo"Kukhetho" oluvulekileyo ", oluya kuvela kwiscreen sekhompyuter.
Ukuqhubeka nenkqubo kufuneka uvule ifolda yokukhuphela emiselweyo. Khangela kwifayile, yinike "konqakrazo”Kwaye utsale ifayile ye-You Tube ukusuka kwi-PC ukuya kwifolda yesixhobo se-usb. Le nkqubo ilula kakhulu, kuba umculo ogcinwe kwikhompyuter yakho ugqithiselwa kwiyunithi yokugcina. i-USB.
Inkqubo iyakhawuleza, ukuba nje uyazi ngqo apho umculo ugcinwa khona kwikhompyuter ukuze igqithiselwe kwi-USB drive. Inkqubo ye- zovimba Iifayile zomculo zinokukhutshelwa ngokulula kwaye zincanyathiselwe kwi-USB drive, emva kokuba iqhagamshelwe kwi-PC, esisibonelelo sabasebenzisi abanomdla wokukhuphela umculo kwi-You Tube.
Ungazikhusela njani iifayile zomculo ezigcinwe kwi-usb drive?
Emva kokugqiba eli nyathelo, kuya kufuneka uthathe amanyathelo xa ususa ifayile ye- iyunithi ye-usb evela kwi-PC. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba ukhetha i-USB drive yekhompyuter kwimenyu esezantsi ekunene kwaye kuqala ukhethe ukhetho "susa hardware ngokukhuselekileyo "okanye" ngelahla "ukuqinisekisa ukuba ezi fayile azonakalanga okanye zilahlekile.
1 Amaphepha amabini aluncedo okukhuphela iifayile zomculo kwi-You Tube
2 Amanyathelo okukhuphela umculo kwi-You Tube
3 Ungazikhusela njani iifayile zomculo ezigcinwe kwi-usb drive?
Usebenza njani Tube?